SIDA LOO SAMEEYO MASHIINKA CAANAHA EE GACMAHAAGA GURIGA - XOOLAHA
Sida loo sameeyo mashiinka caanaha guriga
Beer kasta oo waaweyn iyo kuwo yaryar ayaa u baahan qalab casri ah, mid ka mid ah waxaa caado ahaan loo arkaa inuu yahay mashiinka caanaha. Hase yeeshee, dhammaan xoola-dhaqatadu dhammaantood waxay ku faani karaan lacag ku filan si ay u iibsadaan qalab casri ah oo qalab.
Xaaladdan oo kale, dad badan ayaa u soo jiiday wax soo saarka madax-bannaan ee dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah habka loo hagaajiyay.
Maqaalkani waxaan si faahfaahsan u eegaynaa mabaadii'da aasaasiga ah iyo abaabulka mashruuca mashiinka caanaha leh gacmahayaga, iyo sidoo kale la wadaago siraha xulashada qaybo tayo sare leh.
Muxuu yahay mashiinka caanaha
Mashiinka caanaha waa qalab isdabajoog ah oo caano laga soo saaro caanaha lo'da. Qalabyada noocan oo kale ah waxay ku shaqeeyaan mabda'a xayiraadda vacuum. Kadib markaad caarada ku xirto candhuufta (foosto), waxay si fudud u abuureen shuruudaha cadaadiska atmospheric. Taas awgeed, caanaha, oo saameyn ku yeeshay farqiga cadaadiska, ayaa culeyska ka baxsan dibadda.
Hawlgalka qaybta noocan oo kale ah, dhowr wareegyo ayaa la bixiyaa, waxaa ka mid ah:
mashiinnada laba-xargo-qaadashada - Qalabka ka shaqeeya mabda'a dib u celinta wareegga ah iyo nasasho gaaban ama dib u celin iyo cadaadis. Xaaladda kowaad, vacuum waxaa loo abuuraa macmacaanka udhaxeeya koobka kiniinka iyo candhuufta, kaas oo caanaha laga soo saaro. Marka qayb ka mid ah caanaha ay gasho mashiinka, farqiga cadaadiska ayaa hoos u dhacaya iyo caanuhu waxay istaagaan, iyadoo la ilaalinayo xaaladaha fuuq baxa ee galaaska. Xaaladda labaad, ka dib markii foosha nuugista ah ee foornada ku jirta, heerarka cadaadiska gudaha iyo heerarka cadaadiska;
mashiinnada seddax-istoodhiga - Qalabka ku shaqeeya mabda'a ah baaskiil wadidda hababka neefsashada, riixitaanka iyo nasashada. Kadib markaad qalabka ku xirto candho xoolo ah, vacuum waxaa la sameeyaa inta u dhexeysa koobka kiniinka iyo candhuufta, kaas oo caanaha laga soo saaro. Marka xigta waxay imaaneysaa cadaadiska, ka dib marka seddexaad istaroogga bilaabmaa - naso (cabiraadda cadaadiska atmospheric ee cadaadiska gudaha ee Koobka Koobaad).
Ma taqaanaa? Mashiinka ilkaha ee ugu muhiimsan waxaa la abuuray sannadkii 1859-kii, iyada oo hormoodka johannesört John Kingman.
Kuwa ugu doorbidan ee tarbiyadda casriga casriga ah waa seddex siyoodh oo loo yaqaan 'stroke'. Iyadoo ay caawinayaan, waxaa suurtagal ah in caanaha oo dhan laga saaro si tartiib tartiib ah loona dhaqmo aan waxyeello u geysaneyn candhuufta. Si kastaba ha noqotee, faa'iidada ugu weyn ee nidaamyada caanaha noocan ahi waa kharashka ugu sarreeya, iyo sidoo kale dayactir adag oo adag marka la barbardhigo labadlabaad.
Sida loo sameeyo mashiinka lagu iibiyo gacmahaaga
Inkasta oo ay adag tahay caanaha gawaarida leh iyo gaar ahaan qaddarinta nidaamka, qalabka laftigiisu ma aha mid farsamo ahaan adag. Taasina waa sababta dad badani ay u arkaan in ay naftooda soo saaraan qalab ka soo jeeda qaabab la macquulsan yahay iyo qaybo ka socda dukaanka qalabka dhismaha. Laakiin si loo abuuro qalab tayo sare leh iyo qalab tayo sare leh, waa inaad marka hore wax ka qabataa qaybaha ugu muhiimsan iyo qaababka ugu muhiimsan ee golaha.
Ka hor inta aan la rakibin naqshadihii ugu dambeeyay, beeralay kasta waa inuu si taxadar leh u naqshadeeyaa dhamaan nodnaanta qalabka, siyaabaha suurtagalka ah ee loo xoojin karo iyo qaababka kale ee qalabka. Ujeedooyinkaas, waxaad u baahan tahay inaad si faahfaahsan u fahanto qaababka aasaasiga ah ee naqshadaha moodooyinka ugu caansan ee warshadaha.
Nidaamyada caansiyaadka casriga ahi waxay ka kooban yihiin qaybaha farsamooyinka soo socda
fiilada nooca fuuqbaxaysa;
warshad koronto (farsamo, farsamo ama nooca gacanta).
Taas bedelkeeda, waxaa ka mid ah:
taangiga loo ururiyo caanaha;
xirmooyinka isku xirka bamka;
tubooyinka-loogu talagalay gaadiidka caanaha.
Ma taqaanaa? Cuntada caanaha, lo'da marka hore wuxuu bilaabay in la isticmaalo ilaa 9 kun oo sano ka hor, sidaa daraadeed waa mid ka mid ah xayawaanka ugu da'da badan ee loo isticmaalo ujeedooyinka beeraha.
Waa in la ogaadaa in qalabka noocan oo kale ah oo ka baxsan habdhaqan macquul ah aan la abuuri karin, maadaama aynaan badan oo naga mid ah ay ku faani karaan faahfaahin gaar ah oo kala duwan. Xitaa haddii ay joogaan lathe-sax ah, inta badan, wax soo saarka gudaha ma u oggolaanayaan soo-saarka tayo sare leh ee qaybaha muhiimka ah ee mishiin iyo nidaamyada kale. Taasina waa sababta ugu wanaagsan ee loo doorto in loo arko inay tahay urur madax-bannaan ee warshadda caanaha laga soo saaro warshadaha.
Xulashada qaybaha aasaasiga ah
Xulashada qaybaha - tani waa mid ka mid ah marxaladaha ugu muhiimsan ee abuuraya mishiinka wax lagu iibiyo guriga. Muddadan, waa inaad si taxadar leh wax uga qabataa dhammaan sifooyinka qalab gaar ah, maaddaama oo kaliya maaha waxtarka qalabka mustaqbalka, laakiin sidoo kale waxay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay.
Intaa waxaa dheer, marxaladani waa mid go'an oo badan, sababtoo ah waxay ku jirtaa xulashada qaybaha dayactirka oo suurta gal ah in la muujiyo suurogalnimada iyo faa'iidooyinka dhaqaale ee ugu weyn ee mashiinka caanaha lagu sameeyo.
Soo ogow haddii mashiinnada caanaha ay aad u fiican yihiin, iyo sidoo kale, in la barto sifooyinka farsamada ee mashiinka caanaha sida AID 2.
Mashiinnada iyo matoorada
Nidaamka mashiinka iyo mashiinka ayaa ah wadnaha nidaamka caanaha. Guulitaanka habka caanaha oo dhan ee caanuhu waxay ku xiran tahay waxtarkooda, tayo sare leh. Suuqa waxaa ku jira noocyo kala duwan oo ah noocyada kala duwan ee bambooyin iyo makiinadaha udhaxeeya labada wax soo saarka gudaha iyo dibaddaba.
Markaad dooraneyso cutubyadan waa, ugu horreyntiiba, fiiri kuwa soo saaraha casriga ah iyo waqtiga imtixaanka. Isla mar ahaantaana, waa lagama maarmaan in la dego moodooyinka aan ka yarayn siyaasadda qiimaha celceliska, waxay u istaagaan si wanaagsan oo leh qiimo tayo fiican leh, iyo sidoo kale raqiis ah adeegga dammaanadda kadib. Fikradda taxadar leh waa in la siiyaa korontada iyo isticmaalka tamarta ee bamka iyo engineka. Beeraha yaryar, mashiinnada caanaha oo xoog leh ma ahan kuwo ku habboon, maadaama ayan caddayn qiimaha tamarta tamarta ah. Haddii aysan jirin wax ka badan laba lo'da beerta, qalabka leh awoodda qiyaastii 0.5 kW waxay noqon doontaa tan ugu fiican.
Nidaamyo badan oo ka mid ah 4 kW ama wax ka badan ayaa naftooda u fiican marka la eego beeraha dhexdhexaadka ah markay adeegaan wax ka badan 10 xayawaan.
Dhab ahaan, bambooyin waa labo nooc - fuuqbax iyo saliid. Bamirrada saliidda laguma daro qalabka wax lagu iibiyo. Waxay abuurayaan qadar buuq badan, waxayna u baahan yihiin hagaajin joogto ah ee heerka saliida ee nidaamka.
Intaa waxaa dheer, in bambooyin noocan oo kale ah, wakhti ka dib, xoojinta taangiyada shidaalka ayaa luntay, taas oo yareeyn karta nacnacnimada iyo nadaafadda nidaamka oo idil. Si ka duwan shidaalka, bamka mashiinka firaaqada ah wuxuu ku dhow yahay aamusnaan, aan la qabin shaqada iyo dayactirka.
Ma taqaanaa? Ka hor inta aan muuqaalka mashiinnada caanaha ku jirin qeybtii labaad ee XIX, tuubooyinka tubaakada gaarka ah ayaa la geliyay caanaha si loo baabi'iyo hannaanka caanaha si ay u yeeshaan lo'da, taas oo u oggolaanaysa caanaha in la saaro culeys. Si kastaba ha noqotee, nidaamkan badiyaa wuxuu ku dhammaaday xayawaanka xayawaanka.
Kulanka ka joojinta - tani waa qayb ka mid ah mashiinka caanaha, taas oo aan u qalmin in la keydiyo. Goobtan waxaa ku jira qaybo dhowr ah oo qaybo kala duwan ah oo ku xiran xayawaanka, sidaa daraadeed qaybo qiimo jaban kaliya ma keenaan raaxo la'aan lo'da, laakiin sidoo kale waxyeello. Xaaladdan oo kale, waa inaad dareenkaaga siisid keliya halbeegyada soo bandhigay suuqa. Taasna waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u eegto dhammaan dib u eegista jira ee shabakada.
Marka lagu daro, markaad dooranayso xubno ka mid ah joojinta ka joojinta, waa inaad fiiro gaar ah siisaa:
midabada koobabka - waa inay noqdaan kuwo hufan, waxay gacan ka geysan doontaa inay si muuqaal ah ula socdaan habka caanaha laga soo saaro caanaha;
tayada qashinka - dhammaan qaybaha caag ah ee cutubka ka-joojinta waa in laga sameeyaa qalabka tayada sare leh iyo kuwa aan sunnada ahayn;
muraayadaha dhejiska - muraayadaha waa in lagu hagaajiyaa iyadoo la adeegsanayo koobabka jilicsan ee jilicsan ee silikoon, tani waxay u oggolaaneysaa in la soo saaro qadarka ugu sarreeya ee caanaha leh awoodda ugu yar ee mashiinka iyo nidaamka bamgareynta.
Waxaad kaloo ogaataa sida caanaha lo'da ugu haboon iyo inta jeer ee jeer.
Xaglaha iyo dadka wax soo iibsada
Doorashada laaluush qaadayaasha iyo kuwa wax soo iibsada waa arrin shakhsi ahaaneed, sidaas darteed markaad dooranayso waxyaabahan waa inaad isticmaashaa talooyinka iibiyeyaasha ee dukaanka iyo khibrada shakhsi ahaaneed. Suuqa waxaa ku jira noocyo wax soo saarka ajnabiga ah iyo kuwa gudaha.
Dibedda waxaa lagu gartaa kor u qaadista adkeysiga oo korodhay, halka kuwa guryaha ku jira ay yihiin kuwo hooseeya oo ay fududahay in ay sii wadaan, sidaas darteed, waxay inta badan isticmaalaan doorashadooda u gaarka ah arrintan, iyo sidoo kale cabbirka miisaaniyadda.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira laba qalab oo kala duwan oo suuqa ah, iyo sidoo kale nooca 2-in-mid ah ururiyaha lacagta. Qiimaha ugu raqiisan, fudud si loo rakibo loona ilaaliyo waa qalqaaliyeyaasha. Waxay leeyihiin dhammaan shuruudaha farsamo ee lagama maarmaanka ah, iyo sidoo kale jilicsanaanta jilicsan ee jilicsan, oo aan la gaarin marka la rakibayo qalabka wax lagu dhejiyo iyo ururiyaha. Sidaa darted, iyada oo gacan ka heleysa ururiyaha isku-dhafan, waxaa suurtagal ah in la soo saaro caannaanta dabiiciga ah ee caanaha u dhow caanaha dabiiciga ah.
Waa hagaag, tani waxay, saameyn wanaagsan ku yeelanaysaa tilmaamayaasha tayada caanaha, sidoo kale waxay yareyneysaa fursadaha lo'da qaadashada xanuunka naaso.
Waa muhiim! Marka la iibinayo lo'da, waxaa lagama maarmaan ah in si adag loo raaco sharciyada jira ee nadaafadda, haddii kale hawshu waxay yeelan kartaa waxyeello halis ah caafimaadka xoolaha.
Waxyaabo dheeraad ah
Qodobbada dheeraadka ah ee mishiinka caanaha ayaa inta badan ku jira taaniga koowaad ee caanaha, iyo sidoo kale tuubooyinka isku xira iyo tubooyinka waaweyn. Waxaa lagama maarmaan ah in la raaco xulashada doorashooyinka si adag.
Sida laga soo xigtay iyaga, caanaha waa in loo qaadaa weelka koowaad, sidaa daraadeed waa in laga sameeyaa mid daba-dheer, xiran-u adkaysta, laakiin isla mar ahaantaana aan walxaha sunta ahayn. Haddii kale, qayb ka mid ah walxaha sunta ah waxay si fudud u ururin karaan caanaha, waana tan toos u ah diidmada alaabada oo dhan.
Weelasha koowaad ee caanaha caanaha ayaa lagu doortaa iyada oo ku saleysan doorashooyinka shakhsi ahaaneed iyo fursadaha maaliyadeed. Weelasha noocan oo kale ah waa caag ama bir bir ah (bir aan dahab lahayn ama aluminium). Qalabka mid kastaa wuxuu leeyahay faa'iidooyin iyo faa'iido daro:
weelasha aluminium waxaa lagu kala saaraa culeyska iyo cimriiga ugu hooseeya, si kastaba ha ahaatee, wakhti ka dib, birtu waxay oksidiinaysaa, taasoo keentay in raasamaal aluminium ah caanaha;
Qalabka aan dharka lahayn waa mid ficil ahaan u huraya warbaahin kasta oo gardarro leh oo waa mid aad u adag, laakiin weelasha noocan oo kale ah ayaa inta badan ku dhib badan miisaankooda;
Cuntada darajada cunada waa iftiin iyo ficil ahaanba meel kasta oo cunto ah, laakiin wakhti ka dib waxay dillaacdaa oo ku burburtaa farsamooyinka farsamada.
Marxaladaha ugu muhiimsan ee golaha mashiinka iibinta guriga:
Ku adkee bamka iyo mashiinka si adag oo ku xiran isku xirka furka.
Isku hagaajin qalabka u dhexeeya bamka iyo mootada.
Dhisid shaashad ilaalin ah oo ah tufaaxa ama biraha xaashida ku wareegsan mashiinka iyo makiinada si aad uga ilaaliso wasakhda iyo boodhka xad-dhaafka ah.
Ku soo xir tuubooyinka caagga ah ee dhererka loo baahan yahay ee mashiinka, caanaha waxaa loo wareejin doonaa weelka koowaad.
Ku xidh qalabka garaaca wadnaha si tuubada.
Ku xir qaybta isbeddelka xawaaraha.
Ka samee daloolka daboolka caanaha uruurinta caanaha oo ku rakib tuubada jeegga, tani waa lagama maarmaan in la badiyo cadaadiska inta lagu jiro caano.
Waa muhiim! Tuubbooyinka mashiinka caanaha waa inaysan aheyn mid gaaban, sababtoo ah tani waxay saamayn ku yeelanaysaa isticmaalka qalabka. Sida ugu fiicani waa wadooyinka waaweyn oo dhererkoodu yahay 2 mitir.
Guri ama La iibsaday
Ka hor inta aanad kharashka iibsanin mashiinka caanaha, waa lagama maarmaan in la qiimeeyo dhammaan khayraadka iyo qasaarada qalabka noocan ah, iyo sidoo kale suurta galnimadiisa. Qalabka wax soo saarka madax-bannaan mar walba laguma talin inaad iibsato aalado diyaar ah. Arrintani waxay si gaar ah u cakirantahay haddii ay dhacdo in shirkii kama dambaysta ahaa uu u baahanyahay kharashyo dheeraad ah, iyo sidoo kale shaqada takhasus leh.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee mashiinka caanaha lagu sameeyo:
kharashka yar ee cutubka (ee is-ururinta);
karti u lahaanshaha abuurista qalabka, ee mashruuc shaqsi ah;
Nidaamka waxaa lagu dhammaystirey baahida shakhsiga iyo shuruudaha;
qalabka waxaa loo adeegsan karaa si madaxbannaan.
Ogow waxa ay yihiin siyaabaha loo shaqeynayo iyo noocyada caanaha lo'da, iyo sidoo kale waxa faa'iido leh iyo waxyeello leh.
Maqnaanshaha mishiinka wax lagu cuno ee guriga:
damaanad qaadid la'aanta tayada nidaamka nidaamka;
dejinta nidaamka waxay u baahan tahay aqoon iyo xirfado dheeraad ah;
Waxtarka hooseeya ee kharashka ugu dambeeya (qiimaha shaqada ee takhasusle);
rakibidda qaybaha shakhsi ahaaneed waxay u baahan tahay xal farsamo oo shakhsi
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee mashiinnada wax iibsashada ee warshadaha:
damaanad buuxda ee qalabka waxaa xaqiijiyay shahaadooyinka la xiriira;
damaanad bixiyaha ee loogu talagalay hawlgal siman ee nidaamka;
qalabku wuxuu si buuxda u diyaar garoobaa hawlgalka;
naqshadda iyo naqshadeynta suuxdinta.
Maqnaanshaha ugu weyn ee mashiinnada wax iibsashada ee warshadaha:
xalka farsamada ee qalabka ma tixgelinayo baahida shakhsi ee macaamiisha;
adeegga badanaa wuxuu u baahan yahay inuu waco takhasus gaar ah oo ka socda xarunta adeegga rasmiga ah;
dayactirka sirta ah ee dayactirka iyo dayactirka.
Waa muhiim! Ka hor inta aan la isticmaalin qalabka xayawaanka, waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo buuqeeda, ujeedadaas, rakibidda dhawr maalmood oo isdaba-mar ah waxaa ku jira 10-15 daqiiqo. Haddii kale, lo'da ayaa si aad ah ugu xun inay wax ka qabtaan caanaha farsamada.
Mashiinka caanaha ayaa ah qalab lagama maarmaan ah oo loogu talagalay beeraleyda oo idil. Waxay ka dhigaysaa suurtogalnimada in la yareeyo kharashka guud ee shaqada beeraha, iyo sidoo kale in la sameeyo habka wax soo saarka caanaha aan kala go'a lahayn.
Naqshadiisu waa mid sahlan, kaas oo kuu ogolaanaya inaad abuurto qalab xitaa gacmahaaga. Laakiin si ay qalab noocan oo kale ah u buuxiso shuruudaha casriga ah ee casriga ah, waxaad u baahan tahay inaad si adag u soo dhawaato ma aha oo kaliya xulashada qaybaha, laakiin sidoo kale kulanka nidaamka.